इजलासमा महान्यायाधीवक्ताको प्रश्न–अदालतले दुरुत्साहनलाई बढावा दिएको हो? « AayoMail
इजलासमा महान्यायाधीवक्ताको प्रश्न–अदालतले दुरुत्साहनलाई बढावा दिएको हो?
2021,28 June, 4:14 pm
काठमाडौं–महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले अदालतले दुरुत्साहनलाई बढावा दिएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै बडालले यस्तो बताएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हत्याको धम्की दिइँदा पनि इजलासले कुनै अब्जेक्सन जनाएन। बेलायतको उदाहरण दिएर यहाँको हकमा पनि भन्ने तर्क गर्ने विद्वान वकिलहरुलाई रोकिएन। अदालतले दुरुत्साहनलाई बढावा दिएको हो?’
महान्यायाधीवक्ता बडालले वर्तमान संविधानले निर्दलीयतालाई कुनै स्थान नदिएको जिकिर गरे। ‘७६ (२) मा दलको समर्थन चाहिन्छ। ५ मा दलसँगै स्वतन्त्र सांसद पनि हुन्छ। निर्दललाई यो संविधानले कुनै ठाउँ दिएको छैन। ५ ले राष्ट्रपतिलाई पूर्ण अधिकार दिएको यसमा इजलास पस्नुहुन्न। पस्नु भनेको अदालतले राजनीतिमा हात हाल्नु हो।’
बडालले यो रिट १४६ जनाको नभई ५ जनाको मात्र भएको दाबी गरे। ‘सनाखतलाई रिट निवेदक मान्ने व्यवस्था कहाँ छ श्रीमान। त्यसैले यो रिट अवैधानिक छ, खारेजयोग्य छ।’ उनले भने।